संक्रमणबाट भारतमा सुटर दादीको मृत्यु - नेपालबहस
संक्रमणबाट भारतमा सुटर दादीको मृत्यु
| १८:०७:४९ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भारतमा ‘सुटर दादी’को नामबाट चर्चित चन्द्रो तोमरको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो दुई दिनदेखि श्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई मेरठको एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
८९ वर्षीया तोमरलाई कोरोना संक्रमण भएको खबर उनको परिवारले तीन दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको थियो। अस्पताल भर्ना गरिएको दुई दिनमै उनको निधन भएको हो। उत्तर प्रदेशको बागपतकी उनीमाथि चलचित्र ‘साँड कि आँख’समेत बनेको थियो। जसमा तापसी पन्नु र भुमी पेडनेकरले अभिनय गरेकी थिइन्।
भुमीले चन्द्रो तमोर र तापसीले प्रकाशी तमोरको भुमिका निभाएका थिए। प्रकाशी पनि ‘सुटर दादी’का नामले चिनिन्छिन्। ‘साँड की आँख’मा उनीहरुको संघर्ष देखाइएको छ।
उनको निधनप्रति भुमी र तापसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुःख व्यक्त गरेका छन्। चन्द्रोले ६५ वर्षको उमेरमा सुटिङको अभ्यास सुरु गरेकी थिइन्। उनले २५ नेशनल सुटिङ च्याम्पियसशीपमा सहभागी भएर सबै प्रतियोगिता जितेकी थिइन्। सरुवाती दिनमा उनी अभ्यासका लागि राती घरमा सबैजना सुतिसकेपछि सुटुक्क निस्केर घण्टौँ अभ्यास गर्थिन्।
दैलेखमा कोरोनाले एउटै समुदायका ९ जनाको मृत्यु ३ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट जनस्वास्थ्यकर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको ज्यान गयाे १० मिनेट पहिले
अर्जुनधारा नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङको निधन ३९ मिनेट पहिले
लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई धमाधम कारवाही गर्दै प्रहरी ४७ मिनेट पहिले
कोरोनाले सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर आशा चौधरीको मृत्यु ३ मिनेट पहिले
संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र,कर्मचारीलाई पीपीई ! १७ मिनेट पहिले
विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! १७ मिनेट पहिले
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? २० मिनेट पहिले
निर्धन उत्थानले बिहीबारदेखि संस्थापक शेयर लिलामी बिक्री गर्ने, शेयरमूल्य कति ? ३७ मिनेट पहिले
मेची प्रादेशिक अस्पतालका लागी नौ करोड बजेट विनियोजन ४० मिनेट पहिले
आजदेखि मृतकको परिवारलाई सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्था अन्त्य ४४ मिनेट पहिले
महाकाली अस्पतालमा १८ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान ४८ मिनेट पहिले
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि चिन्तित ५२ मिनेट पहिले
प्रदेश सरकारको सहयोगमा सोलार बत्ती वितरण २० घण्टा पहिले
चाँगुनारायण अस्पताललाई १० अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग २२ घण्टा पहिले
प्रिय कमरेड, तपाईहरु सँधै हाम्रो स्मरणमा रहिरहनुहुनेछ: उपप्रधानमन्त्री पोखरेल २२ घण्टा पहिले
वालिङको कपासे गाउँ शिल ! २२ घण्टा पहिले
संस्थागत आइसोलेशनमा बस्नै मान्दैनन् संक्रमितहरु ६ दिन पहिले
निषेधाज्ञापछि तरकारीको बिक्री वितरणमा कमी ४ दिन पहिले
जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनको मिति तोकिँदै सारिँदै ४ दिन पहिले
भारतमा एक करोड ५० लाख भन्दा बढी संक्रमित ४ हप्ता पहिले
इन्डोनेसियामा बेपत्ता ५३ सैनिकसहित नौसैनिक पनडुब्बीको खोजी तिब्र ४ हप्ता पहिले
सर्लाहीबाट नलकटुवा पेस्तोलसहित एक पक्राउ २३ घण्टा पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय ४ हप्ता पहिले
महानगरपालिकाले नेपालमा पहिलो साइकल ऐन निर्माण गर्ने १ वर्ष पहिले
सप्तरीमा तीन बिरामीसहित थप १२ जनामा संक्रमण ८ महिना पहिले
राष्ट्र प्रमुखबाट बाँडिएको बिभुषणमा चुच्चे नक्सा खै ?? १ महिना पहिले
सिद्धबाबा क्षेत्र नजीकै पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध ११ महिना पहिले